ब्लगरले लेखनमा कत्तिको स्वतन्त्रता पाएको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ :आलोक लम्साल - MeroReport
ब्लगरले लेखनमा कत्तिको स्वतन्त्रता पाएको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ :आलोक लम्साल
पेशाले लेखक, समीक्षक र फिल्मकर्मी आलोक लम्साल अहिले अंग्रेजी विषयमा स्नाकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका छन् । अध्ययन, चिन्तन, मनन र श्रवणलाई जीवनका पाटा मान्ने आलोकलाई नेपालको सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा दार्शनिक पाटो मा अनन्य भएको अनुभव गर्दछन् । आफ्नु जन्मसँगै आफुले चिनेका र जानेका मानिसहरुको वैचारिक धरातलले आफ्नो अस्तित्व तोकेको मान्ने आलोक ब्लग लेखनमा पनि उत्तिकै सक्रिय छन् । मेरो रिपोर्टको साप्ताहिक स्तम्भ साताका ब्लगरमा आज हामीले उनै आलोक लम्साललाई प्रस्तुत गरेका छौ । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानी :
आलोक लम्साललाई अरुले कसरी चिन्ने बताइदिनुस न ।
म लेखक र अनुसन्धानकर्मी हूँ । काम कै कुरा गर्नु पर्दा मैले विभिन्न नाटक, फिल्ममा कन्सेप्ट डिजाइनर, लेखक र निर्देशकको रुपमा काम गरिसकेको र गरिराखेको छु ।
वैचारिक पृष्ठभूमि निर्माण गर्ने एक लेखकको रुपमा म आफुलाई उभ्याउन चाहन्छु ।
तपाईको https://observationjoin.wordpress.com/ बाहेक अरु पनि ब्लग छन् ?
हुनतः मेरा अरु थुप्रै ब्लगहरु छन्, तर अहिले यो ब्लग मात्रै बढी अपडेट गर्छु ।
आफ्नो ब्लगमा के कुराहरु राख्नु हुन्छ बढी रुचाउनु हुन्छ किन । बताइदिनुस न ?
ब्लगमा विशुद्ध मेरा खोज अनुसन्धानका लेखहरु आउँछन् । खासगरि मेरो ब्लगको उद्देश्यहो घटनाको विवरण, जस्तै कुनै मलाई मनमा बिझेका कुराहरु वा घटनाहरुको वास्तविक चित्रण ।
ब्लगिङ गर्न कहिले लेखि थाल्नुभयो र कसरी या किन ब्लगिङ सुरु गर्नुभयो ?
ब्लगिङ गर्न थालेको त धेरै वर्ष भो तर कक्षा प्रयोजनका लागि ब्लगिङ गरिन्थ्यो । तर अहिले बेलाबखत ब्लग अपडेट चैं गरिराख्छु ।
आप्mना विचार, अनौठो घटना विवरण दिनका लागि ब्लगिङ गर्छु ।
मानिसहरु ब्लगिङ गर्न रहर त धेरै नै गर्छन, तर निरन्तर ब्लग गरिरहन या ब्लगलाइ समय दिन त गाह्रो छनि हैन ?
एकदम ठीक हो । नेपालमा ब्लगिङ त्यस्तो बृहत रुपले गरिदैन । विभिन्न काममा व्यस्त र टेक्नोलोजीसँगको समाञ्जस्यताको कमीले गर्दा ब्लगिङ कम भएको हो ।
मेरा धेरै रुचिका विषयहरु छन् । म संगीत, लेखन र चिन्तनमा आफ्नो समय बिताउँछु ।
नेपालमा सोसल मिडियाको प्रयोग त्यति राम्रो भएको छ जस्तो मलाई लागेको छैन । किनभने मानिसहरु सोसल मिडियामा समय व्यर्थ गर्न मात्र प्रयोग गरिरहेका छन् जस्तो लाग्छ ।
नेपाली ब्लगिङको प्रयोगले नेपाली भाषालाई जोगाइ राखेको छ । ब्लगिङले आ-आफ्ना विचारलाई आगाडि सार्न मद्दत गरेको छ । तर ब्लगिङले हरेकलाई स्वतन्त्र बनाएकोले इन्टरनेटमा नचाहिँदा लेख विचारले भ्रम फैलाएको छ ।
अरुका ब्लग कत्तिको पढ्नु हुन्छ ? प्राय पढ्ने ब्लगहरु कुन-कुन हुन् ? विशेष गरी कस्ता विषयवस्तु समेटिएका ब्लग तपाईँका रोजाइमा पर्छ ?
म अरुका ब्लगपनि पढ्छु । फिल्म रिभ्यू, किताब रिभ्यू जस्ता विषयवस्तु पढ्न मलाई रमाइलो लाग्छ । म कहिलेकाँही सामाजिक विषय र राजनैतिक विषयमा लेखिएका ब्लग पनि पढ्ने गर्छु । विभिन्न अनलाइन पत्रपत्रिकामा आउने ब्लग म सायदै पढ्न छुटाउँछु ।
ब्लगरका लागी आचारसंहिताको आवश्यकताको कुरापनि उठिरहेको छ, तपाईंलाई के लाग्छ, जरुरी छ ब्लगरका लागी आचारसंहिता ?
आचारसंहिता भन्दा ब्लगरले आफै मनन गर्नु पर्ने कुरा हो । ब्लगिङ भनेको स्वतन्त्र लेखनको उदाहरण हो । यसमा पाठकको पनि निकै ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ । पाठकसँग आप्mनै स्वतन्त्रता हुन्छ, कुन ब्लग पढ्ने या कुन ब्लग नपढ्ने भन्ने । यसले पनि केही हद सम्म आचारसंहिताको कार्य गरेको हुन्छ । तर पनि न्यूनतम गेटकिपिङ भने जरुरी छ ।
अरुका ब्लगहरु हेर्दा आचारसंहिता कत्तिको पालनाभएको पाउनु भएको छ ?
मैले पढ्ने ब्लगहरु निकै नै सफल लेखकहरुका हुन् । यस्ता ब्लगमा अनुसन्धान निकै जोडिएर आएको हुन्छ । त्यसलाई मापन गर्न आफुले पनि अनुसन्धान गर्नु पर्ने हुन्छ । तर आचारसंहिता कै कुरा गर्नु पर्दा, कहिलेकाहीँ यस्ता लेखकहरुले पनि भ्रम फैलाई राखे कै हुन्छन् ।
नेपाली ब्लगहरु सामाजिक हितमा लेखिएको कत्तिको पाउनु भएको छ ?
धेरै जसो ब्लग अचेल राजनैतिक सेरोफेरोमा रुमल्लिएको छ । यसले सायद नेपाली सामाजिक यथार्थलाई प्रष्फुटन गर्न अवरोध खडा गरेको छ । म मान्छु राजनीतिले सामाज निर्धारण गर्दछ, तर सामाजिक सभ्यताले राजनीतिलाई निर्माण गरेको हुन्छ । समाजिकहित भन्नु भन्दा पनि ब्लगरले लेखनमा कत्तिको स्वतन्त्रता पाएको छ भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।
ब्लगिङ नागरिक पत्रकारिता ठ्याक्कै हो जस्तो लाग्दैन । नागरिक पत्रकारिता सामाजिक विषयवस्तु तथा समाजलाई असर पार्ने विभिन्न विषयवस्तुको संयोजन हो । तर ब्लग नितान्त व्यक्तिगत हुन पनि सक्छ । यसले खासै समाजिक यथार्थलाई उजागर गर्छ जस्तो लाग्दैन । व्यक्तिगत कुरा पनि सामाजिक नै हुन् तर पनि ब्लग निकै नै सतही पनि हुन सक्छ । यो अफवाह पनि हुन सक्छ ।
Comment by Amuna Chapagain on February 13, 2015 at 10:26am